Qalab iyo Dawooyin caafmaad oo la gaarsiiyey degmada Boondheere – Radio Muqdisho
Qalab iyo Dawooyin caafmaad oo la gaarsiiyey degmada Boondheere
Qalab Caafmaad iyo Dawooyin loogu talagalay in lagu caawiyo habeenka Uurka leh oo ay ku deeqeen ardeyda Jaamacadda Banaadir, ayaa la gaarsiiyey xarunta Caafmaadka degmada Boondheere ee gobolka Banaadir.
Deeqdan Qalabka caafmaad iyo Dawooyinka ka kooban ee ka timid ardeyda Jaamacadda Benadir ee la gaarsiiyey xarunta Caafmaadka ee degmada Boondheere, ayaa waxaa lagu wareejiyey maamulka xarunta M.CH-ka, iyagoo si weyn ugu mahadceliyey Qalabka iyo Dawada oo si gaar ah wax loogu qaban doono haweenka degmada ee Uurka leh, kuwaas oo u baahnaa Dawooyinka oo gaarayey ilaa Shan Kartoon oo Faleebooyin iyo dawooyin kale.
Masuuliyiinta Qalabka iyo Dawooyinka xarunta Caafmaad geeyey waxaa ka mid ahaa Agaasimaha Isbitaalka Martiini Dr. Caasho Cumar Axmed, waxa ayna sheegtay in qalabka iyo dawooyinka ay yihiin kuwa ka yimid ardeyda Jaamacadda Benadir, si ay bulshada ugu faa’ideeyaan awoodda ay u leeyihiin in ay ka qeyb-qaataan u gargaaridda shacabkooda, waxa ayna kula dardaarantay maamulka xaruntaasi in ay Haweenka Uurka leh ku caawiyaan Dawooyinka loogu talagalay.
Madaxa M.C.H-ka degmada Boondheere Ruqiya Maxamuud Afrax, ayaa si weyn ugu mahadceliyey ardeyda Jaamacadda Benadir iyo Agaasimaha isbitaalka Martiini sida ay u soo gaarsiiyeen deeqdan muhiimka ah ee dhanka adeegga caafimaadka ah, waxa ayna ballan qaaday in loogu adeeggi doono dadka u baahan.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Baarqab, ayaa sheegtay in Haweenka Soomaaliyeed ay mar walba diyaar u yihiin in ay is caawiyaan, gaar ahaan sidii ay wax ugu qaban lahaayeen kuwa u baahan caafmaadka iyo adeegyada kale, waxa aya u mahadcelisay dhammaan ardeyda iyo maamulka Jaamacadda Banaadir ee magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho.
Tababar la xiriira kubadda Koleyga oo Garoowe ka furmay (Sawirro)